Rohingya Students Forum: 2017
၂၀၁၇ ခေါင်းကြီးသတင်းနေရာ အများဆုးံယူခဲ့သူ ဥပဒေပညာရှင်ဦးကိုနီ━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥━━❥
အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သို့မြန်မာ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအပေါ် အကောင်းမြင်သူများပင် အကြီးအကျယ် စိတ် ကသိကအောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေ့က ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက်ဟု အများစုသိထားကြသည်။ အများလေးစားရသော ဥပဒေပညာရှင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကြံပေးပုဂ္ဂို လ် ဦးကိုနီအား ရန်ကုန်လေဆိပ် အပြင်ဖက် တွင် သေနတ်ဖြင့် ဦးခေါင်းနောက်ဖက်အား ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခံရသညိ။ ပစ်ခတ်မခံရမှီ ဦးကိုနီမှာ မြေးငယ်လေးကို ပွေ့ချီ ထားသည်။ လူသတ်သမားအား လိုက်လံဖမ်းဆီးပေးသည့် အငှားယာဉ်မောင်းလည်း ပစ်သတ်ခံရသည်။
လူထောင်သောင်းချီ ပြီးသူ့ဈာပနကို တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဆရာဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် မီဒီယာနဲ့ လူမှုနယ်ပယ်တွင် တုန်လှုပ်ထိတ်လန့်မှု စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုတွေကိုဖော်ပြဖို့ စကားလုးံမရှိပါ။
သူ့ကုိလုပ်ကြံရတဲ့ဇစ်မြစ်ကိုတော့ ဘယ်သောအခါမှ ရှင်းပြကြမှာမဟုတိပါ။ ကောင်းရာကို ညွှန်ပြသူ ဆရာတစ်ဆူး မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် လူအများက မှတ်ယူထားကြသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က မျိုးချစ်စိတိ တက်ကြွပြီးလုပ်ကြံခဲ့သည့်အမှုဟုသာ ယုံကြည်ဖွယ်မရှိသည့် အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့သည်။ ဦးကိုနီသည်
မြန်မာပြည်မှ မုစ်လင်မ်များတွင် လေးစားအားကျ သြဇာကြီးမားဆုးံ ပုဂ္ဂို လ်တစိဦးဖြစ်သည်။ စစ်တပ်မှရေး ဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတရာထူးရယူနိုင်မှုမရှိသည့် တားမြစ်ချက် ဖောက်ထွက်ကာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုငိပင်ခံပုဂ္ဂို လ်ရာထူးနေရာကို ဖနိတီးအကြံပြု ပေးသူအဖြစ် ဆရာဦးကိုနီအား သိထားကြသည်။
Posted by Rohang king at 12:18 AM
Labels: ရိုကျော်, genocide docs, ပြည်တွင်း
Rizúk Bóra Cúnar Moñgdú
O… holla thani so…
Bolibazaror Doi góra góra,
Hási borí Foirá baijja Miçá,
Baárgori loizar zaimai raza
Tin mailor Tham,
Gañrat billá Badam
Buñda baní sohat banai
Hálor agar Fan ot
Hawarbillá Súwari sabai
Berató zár Ourót zamai ……
Razar billá Bayoun di
Bakka rata rainní
Hatsuratár Moris báñgí
Kéma no ór gal furani
Cúwaiggá Órí lalon gorí
Fátanzár Nun hábái di
Fíri ailó zamair háñcaní……
Aiñossoror Alur moza
Zamaiye hái oiyé biyulá
Dené bamé háñla hañlí
Meittha forothar Mockari
Zaito nosaár toggórí……
O…bái, hanlagai fúno…
Aarkanoró hoillár ború
Rizúk bóra cúnar Moñgdú……
29 Dec, 2018 , 8:48 (Fri)
TaranaeMillat
Watch and download Here full song!
Posted by Rohang king at 1:49 AM
Labels: English, Gana, poem, اردو
လူသတ်တရားခံနဲ့ ပြည်သူ့ ရဲ
တွေ့ ခဲလှတဲ့ ပုံလေး
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တဖွဲ့ ထဲသား
သူ့ ကိုယ်သူများ အပြစ်မရှိ
လုပ်ကြံခံရသူ အပြစ်မဲ့ သူ
ရင်နာမိတယ် မြန်မာပြည်ရယ်။ ။
ရေးဖွဲ့ 🍂 သက်ဝင်းအောင်
ရင်းရင်းနှီးနှီး ရုံးထုတ်လာသော လူသတ်သမား ငကြည်လင်း
Posted by Rohang king at 11:24 AM
Tal Bazana (တူရိယာ)
Daf (ရိုရိုးရာ ဗုံတစ်မျိုး)
Bañcór tali (ဝါးလက်ခုတ်)
Holo baza (အိုပရာ)
Posted by Rohang king at 6:39 AM
Labels: ရိုးရာ, language, Rohingyalish
Hañdi Hañdi Din Haçailám [We Spent Our Life Crying]
Hañdi Hañdi Din Haçailám
Mog Bormár bítoré.
Elóm forí nofarílám
Hañdi hañdi vuk bácailám
Gura gura dudór zadu
Gura gura dudór fuwain
Waiccá keéne more
Fori tori nofarilam
Mogor fuwain dui kalas fori
Cori dóri táke
Aññárár fuwain BA fañs óile
Fanor kíli bese.
Gura gura dudór fúwain
Waiccá kene more
Elóm fori nofarílam
Arakan ót dhoore.
Elóm forí nofarilo
Na hái kene more
Elóm fori no farílam
*BA = Bachelor of Art
📜 Aliya Banu [A Rohingya woman from Buthidoung]
Posted by Rohang king at 6:26 AM
Labels: Gana, poem, Rohingyalish, ပညာရေး
Sainda (နဖူးတွင် အဖြူအပြောက်စက်ပါသော နွား)
Posted by Rohang king at 5:52 AM
Agence France-Presse| The Guardian
Tue 19 Dec ‘17 04.40 GMT
“Ifapeople do not haveawritten language of their own, it is easier to say that as an ethnic group you don’t exist,”
said Mohammad Hanif, who developed the writing system for the Rohingya language in the 1980s.
Posted by Rohang king at 12:51 AM
Labels: English, language, literature, Rohingyalish
ဖဂျရ်ချိန်မှာ 👉 အဇာန်ဆို
နမာဇ် ဖတ်ဖို့ သူမလို😌
နေမြင့်ကာမှ 👉 အိပ်ယာထ
နမားဇ်ကုရ်အာန် 👉 မဖတ်ချင်
ဆိုင်နဲ့ ဈေးကို 👉 ပြေးလို့သွား
စီးပွားရေးနောက် 👉 တကောက်ကောက်
ညနေချိန်မှာ 👉 အိမ်ပြန်လာ
မဂ်ရိဗ်ချိန်ကို 👉 ဘေးဖယ်ထား
နေစဉ်ထွက်တဲ့ 👉 တီဗွီခွေ
အေရှာချိန်မှာ ကြည့်ကာနေ 📺
မပျင်းမရိ 👉 စလောင်းကြည့်
အလ္လာဟ်၊ ရစူလ်👉 မိန့်မှာစကား
စေ့စေ့တွေးကာ 👉 သေသေချာ
အချိန်ရှိခိုက် 👉 လုံ့လစိုက်
ဖြစ်သလိုသာ 👉 နေကြမယ်
ယူကြုံးမရ 👉 ပူလုံးကြွ
Credit to RO MMTB
ဇနီးရဲ့ သစ္စာ ဆင်းရဲခါ
20 ဒီဇင်ဘာ၊ 2017၊ 5း40 PM
Posted by Rohang king at 9:08 AM
အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သခင်ဟာ အလွန်ပဲကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အသျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ပဲ သနားကြင်နာ တော်မူသောအသျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
حضرت موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے پوچھا یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ھے ؟
တမန်တော်မူစာ(အ)က အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကို လျှောက်ထားတော်မူတယ်။ ယား အလ္လာဟ် ကျွန်ုပ်၏
အွမ္မသ်သားများအနက် အဆိုးဆုံးလူက မည်သူနည်း??
اللہ تعالی نے فرمایا کل صبح جو شخص تمھیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بد ترین انسان ھے
မနက်ဖြန်မနက်မှာ အရင်ဆုံးတွေ့ရမည့်သူဟာ သင့်အွမ္မသ်ထဲက အဆိုးဆုံးလူပဲလို့ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က အမိန့်တော်ရှိတယ်။
حضرت موسی علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ھوئے گزرا حضرت موسی علیہ السلام نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ھے میری امت کا سب سے برا انسان
မနက်မိုးလင်းတော့ တမန်တော်မူစာ(အ)က မိုးလင်းလင်းချင်း အိမ်အပြင်ကို ထွက်ကြည့်တယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကလေးကို ပခုံးပေါ်တင်ပြီး ဖြတ်လျှောက်သွားတာကိုတွေ့တော့ တမန်တော်မူစာက မှတ်ယူလိုက်တယ် “ဒီလူက အဆိုးဆုံး လူပဲ”ဆိုတာ…။
پھر آپ اللہ تعالی سے مخاطب ھوئے اور کہا یا اللہ ! میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ھے
တဖန် တမန်တော်မူစာ(အ)က အလ္လာဟ်ထံတော်ပါးမှာ လျှောက်ထားတော်မူတယ်။ ယား အလ္လာဟ် ကျွန်ုပ် အွမ္မသ်သားများတွင် အကောင်းဆုံးသောလူက မည်သူနည်း???
اللہ تعالی نے فرمایا شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپکی امت کا سب سے بہترین انسان ھے
ညနေခင်း အချိန်မှာ အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့သူဟာ သင့်အွမ္မသ်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးသော လူပဲလို့ မိန့်တော်မူ တယ်။
حضرت موسی علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک انکی نظر صبح والے بد ترین انسان پر پڑی یہ وہی شخص جو صبح ملا تھا
တမန်တော်မူစာသည် ညနေခင်းကိုရောက်တော့ မနက်က အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ လူကိုပဲတွေ့ပြန်တယ်။
حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا یا اللہ یا رب کریم! یہ کیا ماجرہ ھے جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ھوسکتا ھے ؟
တမန်တော်မူစာက အလ္လာဟ်ထံတော်ပါးတွင် လျှောက်ထားပြန်တယ်။ ယား အလ္လာဟ် ဒါဘာအဖြစ်ပျက်လဲ
اللہ تعالی نے فرمایا صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا
အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က မိန့်တော်မူတယ်။ အိုး မူစာ(အ) သူဟာ မနက်က ကလေးကို ပခုံးပေါ်တင်ရင်း တောထဲကို ရောက်သွားတော့ သူ့သားလေးက သူ့ကိုမေးတယ်။
ابا ،،، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ھے اس نے کہا ہاں بیٹا یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہی
အိုးအပါ… ဒီတောကြီးထက်ကြီးတာရှိ့သေးလား။ အပါကဖြေတယ်။ ဒီတောကြီးထက်ကြီးတာကတော့ တောင်ကြီးပါ။
بیٹا بولا ابا ،،،، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شئے ھے؟ وہ بولا ہاں بیٹا یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا بہت وسیع و عریض ھے
သားက ထက်မေးပြန်တယ်။ အိုးအပါ… ဒီတောင်ကြီးထက် ကြီးတဲ့အရာရှိ့သေးလား??? အပါကဖြေတယ် သား တောင်ကြီးထက်ကြီးတာ ကောင်းကင်ကြီးပေါ့။ သူက တောင်ကြီးထက်ကြီးလည်းကြီးသလို
بیٹے نے کہا ابا ! اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ھے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری اواز میں بولا ہاں بیٹا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں
သားလေးက ထက်မေးပြန်တယ်။ အပါ… ဒီကောင်းကင်ကြီး ထက်ကြီးတာရှိ့သေးလား???
အပါက အလွန်နာကျဉ်ဝမ်းနည်းပြီး ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်။ ဒီကောင်းကင်ကြီး ထက် ကြီးတာကတော့ အပါရဲ့အပြစ် ဂုနဟ်တွေပါပဲ။
بیٹے نے کہا ابا ! تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ھے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی اگئی اور بولا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناھوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اسکی مغفرت ھے
သားလေးက ထက်မေးပြန်တယ်။ အိုး အပါ--- အပါ့ဂုနဟ်ထက်ကြီးတာရှိ့သေးလား???
အပါ မျက်နှာမှာ အလင်းရောင်တစ်ခုရောက်လာတယ်။ သားကိုဖြေတယ်။ ဟုတ်တယ်သား… အပါအပြစ်တွေထက်ကြီးမားတဲ့ အရာကတော့ အလ္လာဟ်ရဲ့ ကရုဏာတော်တွေနှင့် မဂ်ဖိရသ်တွေပဲဖြစ်တယ်။
اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسی ! مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا میں نے اسکے تمام گناہ ناصرف معاف کر دئیے بلکہ گناھوں کو نیکیوں سے بدل دیا ۔۔۔۔۔
အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က တမန်တော်မူစာကို အမိန့်ရှိ့တယ်။ ငါအလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က သူ့ကို ဂုနဟ်ကို ဂုနဟ်မှန်းသိပြီး ရှက်ကြောက်တဲ့အတွက် နှစ်သက်ရုံတွင်မကဘူး သင့်အွမ္မသ်ရဲ့ အဆိုးဆုံးလူကို
အကောင်းဆုံးလူအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီး တကာလ သူ့ရဲ့ မကောင်းမူတွေကို မအ်ဖ် လုပ်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ
سبق اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا -عاجزی سے اسکے سامنے خود کو جھکا دینا بہت
بڑا عمل ھے
ဒီဖြစ်စဉ်က ဘာသင်္ခန်းစာပေးလဲဆိုရင် အလ္လာဟ်ထံမှာငိုခြင်း၊ ဂုနဟ်ကိုဂုနဟ်မှန်းသိခြင်း၊
အလ္လာဟ်ထံတော်ပါးမှာ ဦးညွှန့်ခြင်းဟာ အကြီးမားဆုံးသောလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။
ယား အလ္လာဟ် ကျနော်မျိုးတို့ကိုလည်း ဂုနဟ်ကို ဂုနဟ်မှန်းသိပြီး သောင်ဝ်ဗဟ်လုပ်နိုင်စွမ်း ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ (အာမီးန်)
Labels: اردو, ဘာသာရေး